AirPods3သည် အပ်ဒိတ်အသစ်တစ်ခု ရရှိသည် | ငါ mac ကပါ။
AirPods3သည် အပ်ဒိတ်အသစ်တစ်ခု ရရှိသည်။
Apple ထုတ်ကုန်များသည် အများဆုံးလက်ခံရရှိသူများဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ updates များကို နှစ်ကုန်မှာ။ ဦးစားပေးတစ်ခုက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများသည် စက်တစ်ခုစီ၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဗားရှင်းတစ်ခုစီတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီမှ အမြဲစိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်း သိရှိရန် အာမခံပါသည်။
ဒီနေ့ဟာအလှည့်ပဲ AirPods 3. အပ်ဒိတ်အသစ်သည် မည်သည့်သတင်းကို ယူဆောင်လာနိုင်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ဒေသန္တရပြုထားသော အမှားကို ပြုပြင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ Apple က အဲဒါကို မိတ်ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AirPods3ကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး Update လုပ်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Apple သည် ၎င်း၏စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံးသော လုံခြုံရေးနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အမြဲစောင့်ကြည့်နေပါသည်။ ကိန်းသေများဖြင့် အောင်မြင်သည်။ updates များကို သူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။ သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း Apple သည် ၎င်းတို့ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်း အမြဲသေချာကြောင်း သက်သေပြပါသည်။
Macs အတွက် macOS စနစ်သည် ကိုယ်စားပြုနိုင်သည့် ရှုပ်ထွေးမှုမှ၊ အချို့သော AirTags ၏ "ရိုးရှင်းသော" firmware များအထိ၊ အားလုံးသည် Apple ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများမှ အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပြီး ယခုနှစ်ကုန်တွင် အပ်ဒိတ်များစွာရှိပါသည်။
ယနေ့သည် AirPods ၏တတိယမျိုးဆက်၏အလှည့်ဖြစ်သည်။ Apple က အခုပဲ ဗားရှင်းကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ 4C170 သင့် firmware ၏ ထုံးစံအတိုင်း၊ ကုမ္ပဏီသည် ယခင်ဗားရှင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်သည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များ ပါလာသည်ကို မရှင်းပြသော်လည်း ၎င်းသည် အရေးမကြီးတော့ဟု မဆိုလိုပါ၊ သေချာပါသည်။
သူတို့ကို ဘယ်လို update လုပ်မလဲ။
AirPods သို့မဟုတ် AirTags ကဲ့သို့သော အချို့သောစက်ပစ္စည်းများတွင် ထုံးစံအတိုင်း Apple သည် သင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။ အင်အားစု သင့် AirPods ၏ ဖိုင်းဝဲဗားရှင်းအသစ်များသို့ ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံမှု။ ယင်းအစား AirPods များကို သင့် iPhone နှင့် Bluetooth မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်သည့်အခါ အသစ်သော Firmware ဗားရှင်းများကို ထည့်သွင်းမည်ဟု ကုမ္ပဏီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်လုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာက စစ်ဆေးဖို့ပါ။ တပ်ဆင်ပြီးသားဗားရှင်း သင်၏ AirPods တွင်၊ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် မွမ်းမံနိုင်ရန် သင့် iPhone သို့ ဘလူးတုသ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားလိုက်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင့် iPhone ရှိ "ဆက်တင်များ" အက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီး "ဘလူးတုသ်" မီနူးကို ဝင်ရောက်ပါ။ စက်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင် သင်၏ AirPods3ကိုရှာပြီး ၎င်းတို့ဘေးရှိ "i" ကို နှိပ်ပါ။ "ဗားရှင်း" နံပါတ်ကိုကြည့်ပါ။ Firmware ဗားရှင်းအသစ်သည် 4C170.
၎င်းသည် စခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသည့် ဗားရှင်းဖြစ်ပါက သင်၏ AirPods များကို လုံးဝ မွမ်းမံထားကြောင်း ဆိုလိုသည်။ အောက်တစ်ထည်ရှိရင် ကြိုက်တယ်။ 4C165AirPods အား အားသွင်းရန်၊ iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် အိတ်ကိုဖွင့်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ ဗားရှင်းနံပါတ်ကို ထပ်မံစစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့သည် နောက်ဆုံးရနေပြီဖြစ်ကြောင်း သင်တွေ့ရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » AirPods3သည် အပ်ဒိတ်အသစ်တစ်ခု ရရှိသည်။
Apple တွင် safari bug အတွက်ဖြေရှင်းချက်ရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်း macOS update ကိုစောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။